Maxkamadda gobolka Banaadir oo xukuntay eedaysanayaal danbiyo kala duwan lagu eedeeyay – Radio Daljir
Maarso 19, 2013 6:01 b 0
Muqdisho, March 19- Maxkamadda gobolka Banaadir ayaa maanta la horkeenay eedeysanayaal ka badan tobon qof kuwaasoo lagu soo xiray eedeymaha kiisas kala duwan.
Eedeysaneyaasha maxkamadda la horkeenay oo isugu jiray wiilal iyo gabdho oo gaarayay illaa iyo 12? eedeysane ayaa ku eedeysan in ay geysteen falal isugu jira dil, kufsi,burcadnimo iyo? tuugnimo.
Inta aysan maxkamaddu xukunka ku dhawaaqin ayaa maxkamadda waxaa yimid ehelada qaar ka mida eedaysanayaasha si ay u dhagaystaan kiiska eheladooda.
Dhageysiga dacwadaha iyo doodaha ka dib waxaa goobta ka hadlay guddoomiyaha maxkamada gobolka Banaadir Maxamed Xaashi waxa uuna sheegay in lix ka mid ah eedaysanayaasha dib loo dhigay dacwadooda halka inta kalana la xukumay.
Guddoomiyaha maxkamadda ayaa sheegay in sadax ka mid ah lagu xukumay min 13 sano oo xariga ah iyo 13 malyan oo shilin Soomaali ah kuwaas oo lagu helay eedeymo la xiriira burcadnimo.
Maxkamadda ayaa sidoo kale sadexdii kale waxaa ay ku xukuntay xabsi u dhaxeeyo 30 sano ilaa Laba sano waxaana eedaysanayaashaasi ku caddaatay inay ku kaceen dil iyo kufsi iyadoona la tilmaamay in ay bixiyaan lacago diyo ah.
Hay’ado ka socda Talyaaniga iyo Maraykanka oo booqday cisbitaalka Baladweyne